Dagaal Nooc Badanaa,Gabadh Trump Soddog U Yahay Oo Ku Sumowday Warqad Sun Lagu Soo Dhex Riday Oo Loo Soo Diray – | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Dagaal Nooc Badanaa,Gabadh Trump Soddog U Yahay Oo Ku Sumowday Warqad Sun...
Dagaal Nooc Badanaa,Gabadh Trump Soddog U Yahay Oo Ku Sumowday Warqad Sun Lagu Soo Dhex Riday Oo Loo Soo Diray –
Masuul ka tirsan maamulka magaalada New York ee dalka Maraykanka ayaa shaaciyey in Vanessa Trump oo ah xaaska wiil uu dhalay Trump iyo laba qof oo kale, cisbitaal loola cararay kaddib markii ay Vanessa Trump furtay warqad boosta loogu soo diray oo lagu soo dhex shubay budo cad.
Afhayeen u hadlay booliiska New York oo lagu magacaabo Carlos Nevis ayaa mar uu warbaahinta arrintan uga warramay waxaa hadalladiisa ka mid ahaa, “Warqaddu boosta ayaa ay soo gaadhay, waxa aanay ku socotay Donald Trump oo ah wiilka uu dhalay madaxweyne Donald Trump”
Waxa ay masuuliyiintu sheegeen in Vanessa markiiba cisbitaal loola cararay, kaddib markii ay ka shakiday in ay dareemayso dawakhad, iyada oo u malaysay in budada warqadda ku jirtay ay dhibaato soo gaadhsiisay.
Sofia Kim oo ah afhayeenka waaxda dabdemiska ee gobalka ayaa iyaduna sheegtay in saddex qof la geeyey cisbitaalka New York si baadhitaanno dheeraad ah loogu sameeyo. Saddexdaas qof ayaanay sida uu afhayeenka booliisku sheegay ay ku jirtay Vanessa Trump.
Tan iyo sannadkii 2001 da dalka Maraykanka waxaa ka jira feejignaan dheeraad ah iyo heegan lagaga hortagayo waraaqo boosta la isugu dirayo oo laga cabsi qabo in ay ku jirto budo sun ah oo qofku marka uu furo neefta dhaqso ugu raacaysa. Sannadkaas 2001 da ayaa waraaqo booseed oo lagu soo dhex shubay budo wadata Anthrax oo sababta cudurka kudka, waxaa loo diray hay’ado kala duwan oo warbaahineed iyo xildhibaanno magac leh oo ku jira labada aqal ee baarlamanka Maraykanka, waxa aana sababta waraaqahaas u dhintay shan qof.
Dhinaca kalana baadhayaal ka socda waaxda sirta ah ee ilaalinta xubnaha qoyska madaxweynaha, ayaa bilaabay baadhitaan ay ku hubinayaan, illaa xadka ay khatartan imiku gaadhsiisan tahay. In kasta oo aanu Aqalka Cadi weli war rasmi ah ka soo saarin.
Masuuliyiinta cisbitaalka lageeyey Venessa Trump ayaa sheegay in baadhitaannada ay ku sameeyeen muujinayaan in aanay wax dhibaato ahi soo gaadhi Vennessa iyo laba qof oo kale oo isniintii la geeyey cisbitaalka.
Previous articleXukuumadda Somaliland ayaa markii ugu horeeysay ka hadashay is casilaada Raysal-wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalegn iyo xaalada ka taagan dalkaas.
Next articleXildhibaan Qabile oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inaan dastuurka qaranka loo furi Karin dan ay cid gaar ahi leedahay,